Wakaaladda African Daily Voice oo ka faaloota Siyaasada Afrika oo Iftiimisay in raysal Wasaare Appy u De Dejinayo wadahadalka Somaliland iyo Somlaiya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wakaaladda African Daily Voice oo ka faaloota Siyaasada Afrika oo...
Wakaaladda African Daily Voice oo ka faaloota Siyaasada Afrika oo Iftiimisay in raysal Wasaare Appy u De Dejinayo wadahadalka Somaliland iyo Somlaiya
Ra’isal wasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa ka war-sugaya waddamada Reer Yurub si loo dhaqaajiyo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Dr Abiy ayaa bilihii la soo dhaafay bilaabay dardar ku saabsan dhexdhexaadinta Somaliland iyo Soomaaliya oo ay hore ugu hawlanaayeen waddamo kale oo Turkigu ugu horeeyo.
Wakaaladda African Daily Voice oo arrimaha Afrika ka warranta ayaa baahisay in ay heshay xog ku saabsan in ra’isal wasaaraha Itoobiya kaliya sugayo talada iyo taageerada reer Yurub kadib markii ay todobaadkan magaalada Hargeysa yimaaddeen 7 dal oo reer Yurub ah kuwaas oo arrimaha wada hadallada kala hadlay madaxweyne Biixi.
Xogta ay arrintan wakaaladdu ka heshay Axaddii ma caddayn in Dr Abiy reer Galbeedka ka sugayo dhaqaale lagu dhaqaajiyo wada hadallada iyo in uu doonayo in ay door ka qaataan.
Ra’isal wasaare Abiy Axmed oo todobaadkii hore ka hadlayay shirweynihii xisbiga Soomaalida ee Jigjiga ayaa sheegay in baaq sanadkii hore uga yimid odayaasha gobolku ahaa in uu xil iska saaro dhammaynta khilaafka Somaliland iyo Soomaaliya ay dawladdiisu fulintiisa bilawday bishii hore.
Baaqiinii sanadkii hore ee ku saabsana arrinta Somaliland iyo Soomaaliya, dawladdaydu waxay bishii hore bilawday dadaallo dib loogu bilaabayo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Labadan dhinac waa u muhiim horumarka iyo ammaanka gobolka,” Sidaas ayuu yidhi Dr Abiy Axmed.
Hadalka Dr Abiy Ayaa imanaya bil uun kadib markii uu madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kala hadlay arrimaha wada hadallada iyo ammaanka gobolka inkasta oo Somaliland ka maagtay qorshe uu ku doonayay in uu Hargeysa keeno madaxweynaha Soomaaliya taas oo dad badan u arkeen in aanu wax badan ka fahansanayn qaddiyadda u dhexeysa Hargeysa iyo Muqdisho.
Laakiin, waddamada reer Galbeedka oo inta badan xallinta khilaafka Somaliland iyo Soomaaliya iskaga riixi jiray in ay hormuud ka noqdaan dalalka gobolka ee la dariska ah ama guud ahaan Midawga Afrika ayaa la eegaya in ay arrintan door ku yeeshaan maaddaama ay dadaal badan galiyaan ammaanka Soomaaliya kana taxadaraan isku dhacyo ka dhasha khilaafka Somaliland iyo Somalia.
Geesta kale waxa muddooyinkii dambe si weyn loo hadal hayay in dawladda Ereteriya danaynayso wada hadallada Somaliland iyo Somalia. Wefti sare oo ka socda Ereteriya oo Hargeysa yimid ayaa maalmihii la soo dhaafay safar ku tagay Muqdisho kaas oo xukuumadda Muqdisho sheegtay in ay xog ka siiyeen socdaalkoodii Hargeysa. Weftiga Ereteriya ayaa isla shalay gaadhay dalka Sucuudiga. Sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Ereteriya waxay dalkaasi kala hadli doonaan ammaanka Geeska Afrika iyo arrimo dalkooda la xidhiidha.
Dadka siyaasadda odorosa ayaa u arka in Ereteriya iyo Itoobiya hoggaamin doonaan dadaallada nabadeed ee Somaliland iyo Soomaaliya lagu dhexdhexaadinayo kadib markii Somaliland dayrisay dhexdhexaadnimada Turkiga oo si weyn u danaynayay in dalkiisa lagu qabto waxaana jira saadaalino ku saabsan in Asmara ama Addis Ababa lagu qaban doono wada hadallada mana cadda in ay wax iska bedeleen hannaankii hore iyo in uu jiro qorshe cusub oo ay la imanayaan dalalkan gobolka ee arrintan danaynaya.
Previous articleGanacsatada waawyn e Somaliland oo Ku Guulaystay Kulan dhex maray Madaxawyne Muuse Biixi iyo ganacsadae Axmed Geele Arab
Next articleDhoollo tuska habka dimuquraaddiyadeed ee ugu wayn caalamka oo Hindiya ka dhacaya